डुडुवा नहरबाट कहिले आउला पानी ? – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
१६ हजार हेक्टर जमिनलाई सिचाई गर्ने उद्देश्य बोकेको सिक्टा सिचाई अन्तरगत पर्ने डुडुवा नहरमा असार लागे पनि पानी आउन सकेको छैन् । ४४ हजार हेक्टर जमिन सिचाई गर्ने क्षमता भएपनि १६ हजार हेक्टर जमिनलाई सिचाई गर्ने जनाएको छ । तर अव्यवस्थित तरीकाले प्रयोग गर्न थालेपछि नहरमा समस्या आएको हो । असार लागेसँगै किसानहरु धान रोपाईमा व्यस्त भएका छन् । जेठको दोस्रो साताबाटै पानी परेपछि बाँकेका अधिकांश खेतहरुमा रोपाई भैरहेको छ ।
यसअघि आकाशे पानीको भरमा रोपाई गर्दै आएका जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा समयमा पानी नपर्दा खेत बाँझो बस्दै आएका थिए । सोही समस्याको समाधान गर्न भन्दै २००३ सालदेखि निर्माण शुरु भएको डुडुवा नहरबाट जिल्लाका ३ वटा पालिकाहरु सिचाई गर्ने क्षमता रहेको छ । तर अव्यवस्थित बस्ती र ढल निकासका कारण समयमा पानी नआएको बाँकेका स्थानीय किसान राकुमार यादवले बताउनुभयो । खेत सिचाईको लागी पुरैनीमा सिक्टा सिचाई आयोजनाले पुरैनी ताल निर्माण गरेको छ । तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई सौन्दर्यकरण गरी पार्कको रुपमा स्थापना गर्न लागेपछि किसानहरुले खेतमा सिचाई गर्न नपाउने त्रास भएको उपमहानगरपालिकाका स्थानीय किसान रामदिन कन्दुले बताउनुभयो ।
उक्त नहरमा स्थानीय ठुला उद्योगले फालेको पानी आएपछि किसानहरुले केही खेतमा रोपाई समेत गरिसकेका छन् । यता नहर अतिक्रमणले समयमा पानी नआउने र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । धान लगाउने समयमा पानी आए पनि गहुँ लगाउने समयमा नहरमा पानीको समस्या छ । तर यतिबेला नहरमा आएको दुषित पानीले धान खेती लगाए पनि उत्पादन नहुने हो की भन्ने स्थानीयलाई डर देखिको छ ।
सलह नियन्त्रणमा सरकार उदासिन !
सिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनामा १४ को मृत्यु, १८ घाइते
सिन्धुपाल्चोक मंसिर २९ ६ किलोमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ । १८ जना यात्रु घाइते भएका छन् । मृतकमध्ये दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाकी जुनुु तामाङको मात्र सनाखत भएको छ । घाइतेमध्ये
हिरमिनियामा मैत्रीपूर्ण फुटबल सम्पन्न
हिरमिनिया (बाँके) कार्तिक–२४ बाँकेको हिरमिनियामा सामाजिक सदभावका लागि मैत्रीपुर्ण फुटवल खेल आज सम्पन्न भएको छ । यूएनडिपीको सहयोग तथा प्रवद्र्धनमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले फुटब
सडक कालोपत्रेका लागि उम्मेदवारहरुको प्रतिवद्धता
खजुरा (बाँके) मंसिर ४ । बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवारहरुले आफनो क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निर्वाचित भएलगत्तै काम सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन । निर्वाचन प्रचार अभियान अन्तर्ग
अन्तर्राष्ट्रिय ६ हजार कर्मचारीलाई कामबाट हटाउँदै क्वान्टास एयर
न्युज बाँकेमा कांग्रेस नेताहरु गर्जिएः देशलाई कंगाल बनाउनेहरु देखि सतर्क बनौं